Yini okufanele uyenze uma umlingani eqamba amanga | Bezzia
UMaria Jose Roldan | 07/06/2021 22:00 | Ubudlelwano
Akuwona wonke amanga ayafana futhi akufani ukukwenza ngokungenacala, ukukwenza ngobubi nokwazi ukuthi kuzodala ukulimala okukhulu komunye umuntu. Endabeni yabashadikazi, ukuqamba amanga kaninginingi nokujwayela kuzokonakalisa elinye lamagugu abaluleke kakhulu kunoma yibuphi ubuhlobo: ukwethembana.
Ngaphandle kokwethembana awukwazi ukunikela ngokusekela noma yiluphi uhlobo lwezithandani ezingathathwa njengezempilo. Akunakuvunyelwa ngaphansi kwanoma yiziphi izimo ukuthi elinye lamaqembu abashadikazi lisebenzise amanga njalo futhi uma lokhu kwenzeka, kufanele limiswe ngokushesha okukhulu.
1 Amanga kulaba abashadayo
2 Okufanele ukwenze uma umlingani eqamba amanga
Amanga kulaba abashadayo
Kuyiqiniso ukuthi amanga asemini kanti nasezithandweni nakulokhu akukho lapho. Kodwa-ke, iphesenti elikhulu lalawa manga liqukethe ukushiya amaqiniso ahlukahlukene angasiza ekuqiniseni umlingani uqobo. Yilokho okwaziwa njengamanga amhlophe futhi bafuna ngaphezu kwakho konke ukunikeza ukuphepha okukhulu namandla ebudlelwaneni uqobo. Ahluke ngokuphelele amanga anjalo futhi adala umonakalo omkhulu kulowo mbhangqwana, ngisho nokwephula inani elibaluleke njengokuthembana phakathi kwabantu ababili.
Uma kwenzeka lo mbhangqwana uvame ukusebenzisa amanga, kubalulekile ukubuza nokwazi ukuthi kungani esebenzisa amanga ebudlelwaneni. Ukusuka lapha kuqhubeke, lo mbhangqwana uphethe ukunquma ukuthi unquma ukuqhubeka nobudlelwano obunjalo noma uma kungafanele ithuba lesibili futhi usike ukulahlekelwa kwabo. Kunoma ikuphi, awukwazi ukubekezelela umuntu onamanga ngoba ubuhlobo buzoba yingozi futhi ngeke kube khona ukwethembana phakathi kwabantu ababandakanyekayo.
Akufani nakancane ukuthi lo mbhangqwana uqambe amanga kanye noma ukuthi bakwenza ngomkhuba. Ukusuka lapha, umuntu okhohlisiwe kufanele azibuze ukuthi ngabe lo omunye umuntu ufanelekile ukwethenjwa nokuthi uyafana yini nezindinganiso okufanele zibe khona ebudlelwaneni obunempilo.
Kuzo zonke izimo, izingxoxo nokuxhumana kuzithandani kubalulekile uma kuziwa ekuxazululeni noma yiluphi uhlobo lwezinkinga noma izingxabano ezingaba khona. Ngaphandle kwalokhu, kufanele kube khona ukuzibophezela kohlangothi lwabantu ababili, ngoba kungenjalo kuyinto engaphinda yenzeke esikhathini esifushane noma esimaphakathi.
Ukuzethemba komuntu olimele kungesinye isici okufanele usicabangele lapho uthethelela amanga. Akulula noma kulula ukwakha kabusha ukwethembana okuphukile futhi uma isimo somzwelo siphansi kungaba nzima ukubuyisela ubudlelwano ezinyaweni. Kungakho ukuzethemba ezimweni ezinjalo kubaluleke kakhulu futhi kubalulekile. Kufanele uqiniseke kakhulu ngaphambi kokuthatha isinyathelo esibalulekile sokuxolela umuntu oqamba amanga bese umnika ithuba lesibili.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » Ubudlelwano » Okufanele ukwenze uma umlingani eqamba amanga
Ungahlobisa kanjani ngesitayela se-rustic chic